Shina: Manao asa tsy fankatoavana ireo moderatera any Yunnan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2009 17:21 GMT
Mba hanaraha-maso ny famoahana (mpandika: sary, lahatsary, feo, soratra) an-tserasera sy ifehezana ny hevitry ny olona dia manome baiko sy toromarika ho an'ny mpandrindra (webmasters) sy ny moderatera isan'andro ny sampan'ny minisiteran'ny filazam-baovao sy fampielezan-kevitra mba hanasongadina karazam-baovao sy hevitra sasany sy hamafa kosa ny hafa any amin'ny dinika, vohikala ary ny vavahadin-tserasera isan-karazany iandraiketan'izy ireo any.
Vao tsy ela akory anefa izay dia niara-nientana ny moderatera sy ny mpandrindra maromaro handà ny toromariky ny sampan-draharahan'ny polisy hamafa lahatsoratra mikasika lozam-piarakodia iray tamin'ny 25 avrily izay nahafatesana olona 22.
Naposaky ny mpiserasera iray antsoina hoe zhijiansha tamin'ny 29 Avrily tao amina vohikala fanaovana dinika iray ny antsipirian'io lozam-piarakodia io ary navoitrany tao fa azo nosorohina ihany iny loza iny raha mba haingana ry zareo tao amin'ny polisy nanadio ny lozam-piarabe vao nitranga nialoha io loza io. Namoaka sary 10 noraisina tamin'ny 4 mey i Zhijiansha ary nohazavainy mazava tsara ny fomba fijeriny. Nasehon'i zhijiansha mihitsy aza ny laharam-pindainy ho fandraisany andraikitra amin'izay nolazainy.
Nandefa hafatra eo noho eo tamin'ny alalan'ny QQ ho ana mpiandraikitra e-vondrona ny tompon'andraikitry ny polisy hamafa ao amin'ny vavahadin-tserasera sy any amin'ny dinika ny lahatsoratr'i zhijiansha raha tokony handalo ny sampan-draharahan'ny filazam-baovao sy ny fampielezan-kevitra aloha ilay hafatra.
Ny ampitson'io dia nitsikera mivantana ny tompon'andraikitra noho ny fikasana hanakatsakana ny fitohizan'ny dinidinika ny mpiserasera sy moderatera telo malaza dia i Bian Min (邊民）i Feng Zhi Moduan （風之末端）ary i Wen Sing（溫星), izay efa nandray anjara ihany koa ny fanadihadiana “Miala saka” nitranga ihany koa tany alohaloha tany tamin'ity taona ity ihany. Raha “nasaina” hiara-misotro kafe amin'ny polisy i zhijiansha rehefa namoaka ny sary, dia nanontany an-tserasera i Bian Min raha: “Mahasahy manasa ireo 22 maty ihany koa ve ny tompon’ andraikitra?” Nametraka ny ahiahiny tao amin'ny lahatsorany ihany koa i Feng Zhi Moduan, manontany raha hilalao ny “miala saka” indray Yunan (mametraka izany fa nanafina ny marina ny tompom-pahefana). Nitety ny fanaovana dinika ireo lahatsoratra roa ireo ary nahasarika ny maro ihany koa.
Noho ny faneriterena nataon'ny sampan-draharahan'ny polisy moa dia nanaisotra ny lahatsoratra ny maro tamin'ireo vavahadin-tserasera maro tahaka ny Sina. Na izany aza, raha miverina any Yunnan isika, dia tsy notanterahina ny fangatahin'ny polisy noho ny tsikera nataon'izy telo mirahalahy voatonona teo sy ny fiaraha-mientana nisy. Azo itarafana ny fifanandrinana eo amin'ny fanaraha-maso ny hevi-bahoaka misy eo amin'ny sampan-draharaham-panjakana sy ny sampan'ny mpiandraikitra an-tserasera isan'andro ity raharaha ity.